ဗီဒီယို: မကြာခင်လာတော့မည်ဖြစ်သော Sliderocket Beta! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 17, 2008 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 17, 2008 Douglas Karr
ကောက်နုတ်ချက် - သင်ဟာ Microsoft's PowerPoint ကိုတွေ့ပြီ။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ Sliderocket ကဲ့သို့သောအင်တာနက်ဖွင့်ထားသည့်ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုကိရိယာတစ်ခုကိုသင်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပါ။ ဒီမှာ Mitch Grasso, CEO နှင့်တည်ထောင်သူ, Sliderocket ကုမ္ပဏီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသရုပ်ပြပြသသည်။
Sliderocket အများပြည်သူသုံး beta အတွက်မကြာမီပြင်ဆင်နေပါပြီ၊ ယနေ့ sign up လုပ်ပါ။
Tags: နေပြည်တော်နှစ်သစ်နည်းဗျူဟာကိုအီးမေးလ်ပို့ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးဆက်ဆံရေးစျေးကွက်ကျမ်း 4တောဘိTorbit ထိုးထွင်းသိမြင်
ဇွန် 17, 2008 မှာ 12: 16 pm တွင်
SlideRocket သည် အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန် ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာ SlideRocket မှ တင်ပြချက်2ခု ပေးနေပါတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား အွန်လိုင်းနမူနာများနှင့် ဆလိုက်များကြားတွင် အလွန်လွယ်ကူစွာ ခုန်ပေါက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ .pdf အရန်သိမ်းဆည်းထားဖို့ Gmail နဲ့ flash drive မှာ ရှိပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို တစ်ချိန်လုံး မယုံနိုင်ဘူး….)
တင်ဆက်မှုများပြီးနောက် ယခုအပတ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့ SlideRocket လင့်ခ်များကို ပို့စ်တင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အလွန်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်။